SOANIERANA-IVONGO : Vehivavy novonoim-badiny dia naleviny tao an-tanin-davanila
Nitrangana vono olona tamin’ny fomba feno habibiana tao amin’ny tanàna antsoina hoe Menara Kaominina Ambahoabe distrikan’i Soanierana-Ivongo. 13 janvier 2020
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana, dia ramatoa iray sahabo 36 taona no maty novonoin’ny vadiny tany anatin’ny alan-davanila ny alatsinainy 30 desambra 2019. Ny angom-baovao no nahalalana fa nisy disadisa teo amin’izy mivady ka raikitra ny fizaràna entana.
Tonga hatramin’ny fizaràna tanimboly. Tany anaty alan-davanila, raikitra indray ny fifamaliana ka novonoin’ilay lehilahy vadiny ilay ramatoa.
Noveleziny hazo avy tao amin’ny hatony, dia naleviny ao anaty alan-davanila avy eo. Gaga ny mpiara-monina fa tsy nahita ilay vehivavy intsony tao ho ao sy nandritra ny fetin’ny taom-baovao. Ilay lehilahy vadiny kosa nifaly sy mbola niliba. Ny alarobia 8 janoary vao fantatra fa maty novonoiny ilay ramatoa. Izy izay niaiky ny heloka vitany sy nanondro ny toerana nandevenany azy.
Hatramin’ny fotoana nanoratanay ny lahatsoratra (alahady maraina), dia mbola nohazomina ao Ambahoabe ilay nahavanon-doza. Ny havan’ilay nahavanon-doza efa vonona hitondra azy any amin’ny mpitandro filaminana ao Soanierana-Ivongo. Ireo havan’ny maty kosa nanafatrafatra fa « aza hetsehina ao mihitsy aloha raha tsy tonga izahay fa hampatezitra anay aminareo fianakavian’ny namono sy ny mpitondra ao an-tanàna izany ». Ny rain’ilay namono vady izay sady sefo fokontany ao Menara. Nanaraka ny vadiny kosa ny dian’ilay vehivavy fa tsy avy ao amin’ilay tanàna kely ny tenany.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68198) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (638) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (344) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (228) 19 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (215) 18 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (195) 18 février 2020